Shirka Machadka Heritage ee ka socda Garoowe (SAWIRRO) | Dhacdo
Home Wararka Maanta Shirka Machadka Heritage ee ka socda Garoowe (SAWIRRO)
Shirka Machadka Heritage ee ka socda Garoowe (SAWIRRO)
Shirka Sanadlaha ee Machadka Heritage ayaa maalintii labaad ka soconaya Magaalada Garoowe, iyadoo looga hadlayo arrimaha dalka.
Shirka ayaa waxaa ka qaybgalaya Ra’iisal Wasaare Kuxigeenka Dalka, Gudoomiye-yaasha Labada Aqal ee Baarlamaanka, Xildhibaano, Golaha Midowga Musharaxiinta, Madaxweyne-yaasha Puntland, Galmudug, Jubbaland iyo aqoonyahano lagu soo martiqaaday.
Shirka oo gelinkii dambe ee Arbacadii ka furmay Magaalada Garoowe ayaa waxaa diiradda lagu saaraya dhameystirka dastuurka qabyo qoraalka, amniga, hannaanka federaalka iyo qabashada doorasho qof iyo cod ah, sanadka 2025.
Xubnaha ka qaybgalaya shirka ayaa su’aalo laga weydiinaya afarta qodob ee miiska saaran, iyadoona ay mararka qaarkood gelayaan arrimo ka baxsan doodaha.
Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar), Ra’iisal Wasaare Kuxigeenka Xukuumadda ayaa raaligelin ka bixiyay hadalkii dhawaan ka soo yeeray, ee uu ku sheegay in doorashada wareegeeda koowaadba uu ku soo bixi doono Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
“Nimankii Madaxweyne Axmed Madoobe ee xalay sheegay ee indhaha cadcadaa ha baqina, ha cabsanina wareegii 1aad xaal baa laga bixiyay. Garoonka waa inoo furan yahay hala soo diyaargaroobo, Insha’Allah doorashada nabad ha inoogu dhacdo, dalkeenuna aanu kaga baxno.” Ayuu yiri Mahdi Maxamed Guuleed.
Xasan Sheekh Maxamuud, Madaxweynihii hore ee Somaliya oo isna wax laga weydiiyay dhameystirka dastuurka ayaa sheegay in Soomaalida ay leedahay khubaro turxaan bixin kara caqabadaha ku gadaaman dastuurka, haddii loo baahdo kaalmo dibadda ahna la heli karo, sidii awalba loo heli jiray.
Shirka Heritage oo sanad kastaba la qabto ayaa waxaa markii ugu horeysay sanadkan lagu qabanayo dalka, iyadoona Garoowe loo xushay in ay martigeliso.
Previous articleXoghayaha Joogtada ee Xafiiska RW oo xilka la wareegay (SAWIRRO)
Next articleSAWIRRO: Booliska suggaya goobaha doorashooyinka oo tababar loo soo xiray